10 Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela
Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eFrance, Uhambo lukaloliwe lwaseJapan, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSpain, Qeqesha uKhenketho e-UK, Uhambo lukaloliwe lwase-USA, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/11/2021)
Ukubhabha esibhakabhakeni, ezilandelayo 10 ezona skyscrapers zintle kwihlabathi liphela zezona zakhiwo zibalaseleyo zehlabathi. Ukudibanisa izinto zekamva, iimpawu ezizinzileyo kunye nohlaza, la 10 izakhiwo ezintle zikwazezinye zezona ndawo zikhe zatyelelwa kwihlabathi jikelele.
1. Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela: I-Shard
306 iimitha ubude, iShard tower sesona sakhiwo sibonwa siphezulu eLondon. nge elona qonga libalaseleyo lokujonga eLondon, unokubona isibhakabhaka esihle sesixeko ukusuka kuphahla lwe-skyscraper. Iqonga lokubukela li 244 iimitha kwaye inika iimbono phantse yonke indlela eya kwikona nganye yaseLondon.
Ivulwe ngaphakathi 2003, i-Shard itsala iindwendwe ezivela kwihlabathi lonke. Ikakhulu ngenxa yokuba uyilo loyilo olulodwa lubalasele phakathi kwazo zonke izakhiwo eziphakamileyo zehlabathi. Uyilo lweShard luqulathe iziqwenga zeglasi kwaye luyilwe njengeqhekeza leglasi, nazi 11,000 iipaneli zeglasi kulwakhiwo lukaShard. ke, xa eLondon kufanelekile ukutyelelwa, kunye nesidlo sokutshona kwelanga esimangalisayo kwiindawo zokutyela zaseShard kwimigangatho 31-33, aphezulu e-UK.
IBerlin iya eLondon ngoLoliwe
2. Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela: Evolution Tower eMoscow
246 iimitha ubude, iNqaba ye-Evolution ejikelezayo eMoscow yenye yezona zakhiwo zinomtsalane kwihlabathi. I-skyscraper enhle ilawula isithili sezoshishino saseMoscow kwiSixeko saseMoscow kwaye sijonge uMlambo waseMoscow. Ngesikhululo semetro, imoli yokuthenga, iiofisi, kunye neendawo eziluhlaza, i I-Evolution Tower yenye yezona ndawo zinomtsalane eMoscow.
Ulwakhiwo loyilo luyamangalisa kwaye luyamangalisa, ukwenza iEvolution ibenye ezona ndawo zimangalisayo zokundwendwela iRussia. ke, akukho mfuneko yokuthetha ukuba i-skyscraper yaseRashiya ibonisa iifoto ezininzi zokuhamba emhlabeni jikelele kwaye ngumthombo wokuxelisa abakhi bezakhiwo kunye neenjineli kwihlabathi jikelele..
Prague ukuya eBudapest ngoololiwe
EMunich ukuya eBudapest ngoololiwe
I-Graz ukuya eBudapest ngoLoliwe
3. Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela: ubume besakhiwo sequmrhu
Esona sakhiwo sidumileyo seofisi emhlabeni, i Empire State Building ukususela 1931. I-scraper ebalaseleyo yaseNew York yakhiwa ngeminyaka yoo-1920s kumdyarho wokwakha ezona zakhiwo ziphezulu emhlabeni.. I-Empire State Building iphumelele ugqatso xa abayili bezakhiwo u-Raskob noSmith beyila i-epic skyscraper egqwesileyo kwisibhakabhaka saseManhattan. 381 mitha.
I-Empire State Building yenye yeendawo ezimele zibonwe eNew York. Ukusuka kumgangatho we-38, ungakwamkela ukuphuma kwelanga kunye nesixeko esingalaliyo. Ngeembono zeCentral Park, I-Fifth Avenue ukuya kwi-Times Square, iimbono ezivela Empire State Building azilibaleki.
4. Inqaba yaseShanghai
I-skyscraper yesibini ubude emhlabeni, Shanghai Tower ifikelela 632 mitha. Ukulawula ukuphefumla kwesibhakabhaka saseShanghai, Inqaba yaseShanghai inelona qonga liphezulu lokujonga kwihlabathi elibonelela ngeembono zaseShanghai unyaka wonke.
Iimpawu ezongezelelweyo ezizodwa ziquka i-facade yeglasi, ngomphezulu ojikelezayo, kwaye enye yezona zinto zinomdla kakhulu iindawo zangaphakathi eziluhlaza. Ukongeza kuyilo oluluhlaza, inqaba iyilwe njengesixeko ngaphakathi kwayo, hotel, iindawo zokuthengisa, iiofisi, kunye neendawo zeendwendwe zoluntu. Inqaba yaseShanghai ayisiyiyo enye kuphela 10 ezona skyscrapers zintle kwihlabathi liphela, kodwa ikwalelona likhulu, ngokukwazi ukwamkela 16,000 abantu.
5. IBhanki yaseTshayina Tower Hong Kong
Ukulawula isibhakabhaka saseHong Kong, Isakhiwo seBhanki yaseTshayina sesinye sezona zakhiwo zibalaseleyo eTshayina. at 367 mitha, I-Bank of China Tower yenye yezona zakhiwo zide kakhulu kwihlabathi kunye nesona sakhiwo siphawulekayo kumbindi weHong Kong.. Ngeephelo ezibukhali kunye noyilo lwe-triangular ngaphandle, IBhanki yaseTshayina iya kukugcina ubukele iiyure ekupheleni.
Ngelixa iindwendwe ezininzi eziya eHong Kong zifumana le skyscraper yodwa, kukho ezimbalwa ezingachukunyiswanga. Isizathu sezona mpawu ezahlula i-BOC kwenye izakhiwo ezihle e China. Imiphetho ebukhali kunye no-X, zisimboli ezimbi kwi-Feng Shui. kunjalo, Ithamsanqa elibi elinokubakho alibathinteli abahambi ukuba bathande obu buhle bokwakha yonke imihla.
Enye ye 10 ezona skyscrapers zintle kwihlabathi, yindawo yokuphumla. IMarina Sands ijongene neMarina Bay, kunye neendawo zokutyela, ekhasino, iholo yeqonga, kwiinqaba ezintathu, idityaniswe yi-SkyPark yeemitha ezingama-340 ubude. Ukwengeza, eyona nto imangalisayo ineyona pool iphakamileyo yehlabathi.
Umyili wezakhiwo uMoses Safdie wachaza ukuba uyilo lwe-skyscraper luphefumlelwe yidekhi yamakhadi.. Kukho iimbono ezimangalisayo zaseSingapore ukusuka echibini elingapheliyo, kumgangatho wama-57. Ukwengeza, ungayonwabela i-Marina Bay Sands skyscraper emangalisayo evela kwiGadi nge-Bay, enye indawo entle yokutyelela eSingapore.
7. Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela: Tokyo Skytree
nge 2 iidekhi zokujonga, iTokyo Skytree skyscraper sesinye sezona zakhiwo zintlanu ziphakamileyo emhlabeni.. at 634 mitha, Unokufumana ikofu kwi-cafe ephezulu emhlabeni, kunye nemibono emangalisayo yeTokyo. I-Skytree yakhiwa ukuba ibe yinqaba kamabonwakude kunye neyosasazo kwaye kamva yaba yeyona ndawo ibalulekileyo eTokyo..
Ukongeza kwiidekhi zokujonga, kunye nekhefi, Ungandwendwela i-aquarium kunye neplanethirium kwisiseko sayo. Iidekhi zokujonga zibonelela 360 Iimbono zedigri zesona sixeko sinekamva kwaye simnandi eJapan, naseAsia. Eyona nto iphambili, Yiza ulungiselele ukuchitha usuku olupheleleyo uncoma iimbono kunye nokutyelela iindawo ezininzi ezimangalisayo kwi-Skytree skyscraper yaseTokyo..
IVenice eya eRoma ngoololiwe
I-China ngumxube onomdla wale mihla kunye nowakudala, apho iitempile zisindayo ecaleni kwezakhiwo eziphakamileyo ezinyukela emafini. Enye ye iindawo ezilungileyo zokutyelela eChina yiGuangzhou kunye neCanton Tower yeenkwenkwezi. Kwi-epic 604 ubude beemitha, I-Canton Tower ibonakala kuyo nayiphi na indawo e-Guangzhou.
Enye yezona zinto zibalaseleyo onokuzenza eCanton Tower kukukhwela itram phezulu. ke, ukuba awunalo uloyiko lokuphakama, yiza ebusuku, when the tower is illuminated with bright rainbow colors. From tram combo to a viewing deck ticket, ukutyelela iCanton Tower ngamava abalaseleyo kwaye ngaphezu kokuma nje kwisiseko somhlathi.
Interlaken ukuya Zurich Ngololiwe
ILucerne iya eZurich ngoLoliwe
UBern waya eZurich ngoLoliwe
Geneva ukuya eZurich ngoLoliwe
9. ILiebian International Building
Eyona ngxangxasi inkulu eyenziwe ngumntu luphawu oluhle kakhulu lwesona sibhakabhaka siphefumlayo emhlabeni.. ILiebian International skyscraper yi 121 iimitha ubude kunye nengxangxasi phezu kobuso bayo. Ezona ngxangxasi zide zondla iimpompo ezine kunye nemvula kwisiseko sayo. Ungasibona esi sakhiwo simangalisayo kuhambo lwakho lokuya eTshayina, ngakumbi eGuiyang, kuMzantsi-ntshona China.
I-Liebian skyscraper isenokungabi sesona side ehlabathini, kodwa ngokuqinisekileyo yenye ephezulu 5 ezona skyscrapers zintle kwihlabathi.
10. Uninzi lweeSkyscrapers ezintle kwihlabathi liphela: Agbar Tower Barcelona
I-Torre Glories yi-skyscraper ephawulekayo phakathi kweendawo ezininzi ezintle ze-Barcelona. Imigangatho engama-38 144 Iimitha skyscraper yindalo yomakhi waseFransi. I-skyscraper entle inemilo yegiza enyukela esibhakabhakeni kwaye yayiyilwe emva kwentaba iMontserrat.. Ukunika ujongo olusondeleyo uya kuqaphela ukuba yonke i-facade yenziwe ngeglasi.
kunjalo, Eyona nto ibalaseleyo yeAgbar Tower kukukhanya okumibalabala. I-skyscraper yaseSpain iye 4,500 Izixhobo ze-LED. Ezi zixhobo ze-LED zibonisa imifanekiso kwaye zinokuvelisa 16 imibala million. Ngaphezu, Ukuba ujikeleze iAgbar Tower uya kuqaphela ireferensi yolunye uphawu olumangalisayo, Usapho lukaGaudi lukaSagrada. ke, Nanini na xa ufuna ukutyelela esi sakhiwo siphakamileyo esihle, lungele ukuyincoma imini yonke.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwi 10 ezona skyscrapers zintle kwihlabathi liphela ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposi yethu yebhlog "I-10 Ezona zakhiwo zintle zeSkyscrapers kwihlabathi liphela" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)